Warshadda Shiinaha ee Polyester Felt iyo soo-saareyaasha | Huasheng
Magaca badeecada Polyester Felt
Waxyaabaha 100% Polyester
Ballac ugu badnaan ilaa 3.3m
Dhererka 50m / kitaab duudduuban, 100m / duub ama si gaar ah loo sameeyay
Midab kala duwan sida Kaarka Midabka Pantone
Cirbad aan xiiran ahayn ayaa la ruxay
CE, AKHRI, ISO9001, AZO
Fiber polyester (oo loo soo gaabiyo PET fiber) waa fiber isku-dhafan ah oo laga helo isku-birta polyester ee ay sameysay polycondensation of acid dibasic acid iyo aalkolada cabba. Fiber-ka loo yaqaan 'Polyester fiber' waxaa badanaa laga sameeyaa polyetylen terephthalate.
Polyester dareemey waa irbad isku dhafan oo feeraha laga dareemo fiiloyinka polyester. Xadhkaha polyester-ka ayaa lagu durayaa irbad gaar ah oo midab leh, midna leh nabar yar yar dhamaadka. Caqabadahaani waxay soo jiidayaan polyesterka laftiisa, iyagoo isku xiraya si ay u abuuraan dhar.
Polyester dareentay waxaa lagu bixiyaa noocyo farabadan oo cufan iyo dhumuc weyn si loo haqabtiro baahiyahaaga. Waxay soo bandhigtaa qiimo jaban oo ka duwan dhogor, waxaana loo isticmaali karaa dalabyo badan oo warshadeed iyo ganacsi. Warshadaha Monarch Textiles wuxuu soosaarayaa irbad garaacday polyester alaabooyinkiisa si uu ula kulmo faahfaahintaada.
Waxyaabaha Polyester-ka laga dareemay waxay soo bandhigaan faa iidooyin badan. Kaliya kaliya ma ahan in polyester-ka ka qaalisan yahay dhogorta dhogorta, laakiin irbadda gaagaarka leh ee loo yaqaan polyester-ka ayaa dareemeysa sidoo kale inay siineyso caabbinta aashitada dabiiciga, caaryada, dhiig-baxa, iyo walxaha kale ee sunta ah ee dhaawici kara maaddada.
Faa'iidooyinka kale ee xirmooyinka polyester-ka waxaa ka mid ah
Dulqaad kuleylka sarreeya
Resistence xidhashada iyo iftiinka qoraxda
Ku habboon codsiyada kuleylka qallalan
Aad ugu fiican ururinta wasaqda
Waara, dabacsan, fududahay in la gooyo, caro go'itaan, dahaarid, go'doomin, fududahay in la dhaqo iyo astaamaha dhaqso u-engejinta.
Farshaxanka DIY, Taariikhda Arooska / Bandhigga, Qurxinta Kirismaska, Qolka jiifka iyo gogosha, boorsooyinka, kabaha, boorsooyinka, xirmadaha hadiyado, qurxinta gudaha.
Hore: Wuu jeexjeexay Suufka